यौनसम्पर्कको समयमा पुरुषले यी कुरा कहिल्यै सुन्न चाहाँदैनन् | Hamro Doctor info@hamrodoctor.com
यौनसम्पर्कको समयमा पुरुषले यी कुरा कहिल्यै सुन्न चाहाँदैनन् Home
यौनसम्पर्कको समयमा पुरुषले यी कुरा कहिल्यै सुन्न चाहाँदैनन् यौनसम्पर्कको समयमा पुरुषले यी कुरा कहिल्यै सुन्न चाहाँदैनन् Mar 21, 2017 17:03
18.1K0comments
यौन सम्बन्ध स्थापित गर्ने क्रममा यस्ता कयौं कुराहरु हुन्छन्, जुन महिलाले नभन्नु नै उचित हुन्छ । यौन मनोविद्हरुका अनुसार केही यस्ता कुराहरु छन् जुन पुरुषहरुले यौनसम्पर्कको समयमा सुन्ननै चाहाँदैनन् । जसका कारण तपार्इंको सम्बन्धमा तिक्तता समेत आउनसक्छ । त्यसैले यौनसम्पर्कको समयमा धेरै कुरामा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । यौनसम्पर्कको समयमा बाहिरी कुरा भन्दा पनि आफ्नो यौन सम्बन्ध कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिँदै प्ले फोरमा केन्द्रित हुनुपर्छ । जसले गर्दा तपार्इंको यौन सम्बन्ध सुमधूर रहोस् । न की तपाईंको कुराले यौन साथीको मुड नबिग्रियोस् । के हुन बेडरुममा पुरुषले सुन्न नचाहने कुरा ?
यौन सम्पर्कको समयमा महिलाभन्दा पुरुषहरुमा सन्तुष्टि पहिला हुने गर्छ । तर पनि पुरुषहरु आफ्नो यौन साथीलाई भरपुर सन्तुष्टि दिने प्रयास गरिरहेको हुन्छ । यस्तो समयमा कहिले पनि आफु डिस्चार्ज भएको भन्नु हुँदैन । यस्तो कुराले पुरुषमा इगो महशुस हुनसक्छ । त्यसैले यस्तो कुरा नभन्नु नै राम्रो हुन्छ । बेडरुममा तपाईंको यौनसाथीले यौन सम्बन्ध राख्न खोज्दा कहिले पनि सिधै बेवास्ता गर्नु हुँदैन । उनीहरुले यौन सम्बन्धका विषयमा यस्ता कुरा सुन्न चाहाँदैनन् । यौनसम्पर्कको समयमा पुराना विवादित कुराहरुलाई कहिले पनि निकाल्नु हुँदैन । जुन कुराले तपार्इंको यौन जीवनमा दख्खल पुर्याउन सक्छ ।
के यौनीमा विर्य नपर्दा पनि गर्भ रहन्छ ? हाम्रो डाक्टर एप (Google Playstore) र (Apple Store) मा पनि उप्लब्ध छ । डाउनलोड गर्नुहोला।